चीन र त्यसको मुस्लिम आदिवासी अल्पसंख्यकहरु विभिन्न प्रकारले प्रताडित::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
चीन र त्यसको मुस्लिम आदिवासी अल्पसंख्यकहरु विभिन्न प्रकारले प्रताडित
– अल्लाबक्स प्रकाशित : बुधबार, पुस ९, २०७६
चीनको सिन्चियोगका युधुर अल्पसंख्यकहरुलाई प्रताडित हुँदै आएका छन् । तर उसको अन्य अल्पसंख्यकहरु खासगरीकन दुई मुस्लिमहरुको व्यवहारबारे कसैलाई थाहा छैन । हालै न्यूयोर्क टाइम्सले सेप्टेम्बर २१, २०१९ का दिन दुई अल्पसंख्यक जनसंख्या बारे चीनको व्यवहारलाई सार्वजनिक गरेको छ, जसले विभिन्न प्रकारको दमनको प्रकृति र स्वरुप समेत बारे कडा टिप्पणी गरेको छ, जसले विभिन्न प्रकारले दमनको प्रवृत्ति र स्वरुप समेत बारे कडा टिप्पणी गरेको छ । हालैको एक निरिक्षण प्रतिवेदनले देखाए अनुसार त्यसको प्रकृति र स्वरुप चिन्चोगंसम्म मात्र सिमित रहेको छैन ।
बरु चीनको अन्य भागहरुमा रहेका मुस्लिम युथुर समुदायहरु चिनियाँ सरकारबाट गर्ने गरिएको घोर ज्यादतीबाट प्रताडित छन् । उदाहरणका लागि, चीनको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा लिट्ल मक्का नामले परिचित रहेको नगर नजिकको एक सानो गाँउ लिन्झिया समेतमा रहेका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायद्वारा निर्मित मस्जिदहरुमाथि रहेका गुम्बा र स–साना चिन्नहरु समेतलाई सरकारले ध्वस्त पारिदिएको छ ।
त्यस्तै प्रकारका विध्वंशकारी कार्यहरु मंलोलिया, हेनान र निगझिआको भित्री भागमा रहेको हुई समुदायको गृहनगर, जो चीनको सबैभन्दा ठूलो आदिवासी समुदायको वासस्थल रहेको छ, त्यहाँ पनि व्यापक स्तरमा विध्वंशका गतिविधीहरु संचालन गरी सकेको छ । युनानको दक्षिण प्रान्तमा तीन ठूला मस्जिद मस्जिद प्रान्तिय अधिकारीद्वारा बन्द गरिएको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक हुन आएको छ ।
अझ उल्लेखनिय कुरा निगझिआ प्रान्तमा अखि लिपीमा सार्वजनिक गरिएका प्रर्दशनहरु समेतलाई प्रतिबन्धित गरीएको छ । चीन यती हदसम्म पुगिसकेको छ, की हालाल भन्ने शव्दलाई समेत रेस्टुरेन्टहरुले खाना तयार गर्ने इस्लामिक अधिकारिक सिलको परम्पराबाट झिक्न लगाएर त्यसको प्रयोग अब चिनियाँ स्वरुपमा गर्न थालिसकेको छ ।
निषेधको यो प्रक्रिया बेइजिङ लगायत अन्य ठाँउमा समेत विस्तारित गरिएको छ । थुप्रै प्रान्तहरुका अधिकारीहरुले खानाका लागि हलाल प्रमाणप्रत्र वितरण गर्न बन्द गरिएको छ । त्यस्तै डेरी र गहुँ उत्पादन गर्ने रेस्टुरेन्टहरुमा समेत वितरण गर्न बन्द गरिएको छ ।
चीनमा इस्लामको अवरोध स्पष्टरुपमा चिनियाङमा मात्र प्रतिवन्धित गरिएको छैन । चीनको सत्ताले चिनियाँ भाषा बोल्नेहरुलाई समाहित गर्ने प्रयास गर्नु विखण्डनबाद वा अतिवादको हालको किर्तिमान होइन् ।
एक ख्यातिप्राप्त पर्यवेक्षकका अनुसार हुई समुदायलाई लक्षित गर्ने अभियानको उद्धेश्य विचारधारा, प्रतिक चिन्ह, संकृतिक, उत्पादन लगायत कुनै चीनका लागि आवश्यक नभएको चिजलाई वेवस्ता गर्नु हो । यसले जीवनका लागि उपयोगी र सार्थक हुने कुरोलाई अनुमति दिनु हो ।
पारसी व्यापारीहरुका प्रिय अनुनायी हुई समुदाय चिनियाँ सत्ताको बढ्दो दबाब खेप्दै आएका छन् । जबकी बेइजिङले आदिवासी वहुसंख्यक हानलाई तिनीहरुमा राष्ट्रियताको भावना विकास गर्न उल्लेखनिय सहयोग गर्दै आएको छ ।
टेलिभिजन मार्फत आधिकारिक वक्तव्यका माध्यमबाट झिको दृष्टिकोण चचीनको ऐतिहासिक शक्ति, अर्थ, संस्कृति र गौरवलाई पुनः प्राप्त गर्ने चीनको सपना रहेका बारे खुलस्तरुपमा भन्ने गरिएको छ । जबकी १०.५ मिलियन जति जनसंख्या भएको युधुरहरु माथि सिन्चियोगमा गरिने गरिएको शोषणकारी र आक्रमक प्रक्रिया अपनाइएका छ ।
त्यस अनुपातमा हुई विरुद्ध कुनै नयाँ प्रक्रिया लागु गरिएको छैन । निनझिया क्षेत्रमा हुई चीनको तेस्रो ठूलो आदिवासी अल्पसंख्यक रहेको छ । समग्रमा चीनको जम्मा जनसंख्या १.४ विलियन मध्य २२–२३ मिलियन मुस्लिमहरु रहेका छन् । युधुरहरु माथि सिन्चियोङमा जसरी व्यापकस्तरमा प्रतिबन्ध र आक्रमक निगरानी राखिएको छ । त्यसको अनुपातमा हुई विरुद्ध कुनै नयाँ प्रक्रिया लागु गरिएको छैन ।
१०.५ मिलियन जति जनसंख्या भएको युधुरले हुई मध्य चिन्ता र आक्रोस फिजाई दिएको छ । निंगझिया क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको हुई चीनको तेस्रो ठूलो आदिवासी अल्पसंख्यक हो ।
चीनमा अल्पसंख्यकहरु विरुद्ध अपनाईएको प्रक्रियाले राष्ट्रपति सि जिङपिङद्वारा लागु गरिएको कडा र कठोर प्रकृतिका नीतिहरुलाई प्रर्दशित गर्दछ । किनकी उनको चाहना कम्युनिष्ट पार्टीको प्रधानता पुर्नस्थापित गरी आफ्नो विचारधार र सिद्धान्तहरु जीवनको हरेक क्षेत्रमा लागु गर्नु रहेको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चीनमा हरेक नागरिकले उनलाई आफ्नो र उनको अनुकरण गर्नु रहेको छ । चीनको सत्तालाई यो भय छ की मुस्लिमहरुको अस्था धर्मिक अतिवादमा परिणत भएको खण्डमा यसले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौति दिन सक्नेछ ।
त्यसको फलस्वरुप कम्युनिष्ट पार्टीले चीनभरीमा नेता सि जिङफिङका तर्फबाट स्लामिक रिती रिवाज र क्रियाकलापहरुलाई प्रतिबन्धित गर्ने गरी नयाँ दिर्नेशन कार्यान्वयन हुन लागेको छ । सन् २०१८ मा चीनको राष्ट्रिय परिषदले एक निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसको शिर्षक ‘नयाँ परिस्थितीमा इस्लामिक कार्यलाई पुर्नस्थापित र सुधार गर्नु’ रहेको थियो । त्यस निर्देशन अनुरुप स्थानीय अधिकारीहरुलाई राज्यको क्रियाकलाप र धर्मनिरपेक्ष जीवनमा इस्लामको हस्तक्षेपलाई रोक्नु रहेको थियो । जबकी जनजीवनको क्षेत्रमा त्यसको कुनै निर्देशन अधिकारी रुपमा रहेको देखिएको छैन ।
चीनका स्लामिक स्थलहरु परम्परा र पर्दशन एंव रितिरिवाजहरुको अरबीकरण न होस भन्नका लागि त्यस्तो निर्देशिका चेतावनी स्वरुप जारी गरिएको थियो ।
जर्मनमा रहेको विश्व युधुर महासभाबाट जारी निर्देशिका चीनको कम्युनिष्ट पार्टीलाई उपलब्ध गराईएकोमा चीनको केन्द्रीय नेतृत्वले स्थानीय अधिकारीहरुलाई कलाकृति, भेषभुषा, धार्मिक व्यवहार तथा भाषा माथि साउदी र अरबको प्रभुत्वलाई प्रभावहिन बनाउन निर्देशित गरिएको छ ।
यो उल्लेखनिय छ की यसले इस्लामको सबैभन्दा पवित्र स्थल माथि साउदी अरबको प्रभुत्वको संकेत र सम्बन्धलाई प्रर्दशित गर्छ । त्यसका साथै जतिखेर साउदी निर्देशित ओआईसीले निहित स्वार्थ जस्तै व्यापारका लागि चीनलाई युधुर मुस्लिमहरुलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
विखण्डको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मध्इ एसिया वा इस्लामिक क्रियाकलापहरु जस्तै मस्जिद तथा गुम्बाहरु कलात्मक विशेषता एंव विशिष्टताहरुलाई लक्षित एंव प्रभावित पार्नु रहेको छ । त्यस्ता प्रतिकहरु चीनका लागि खतरनाक सम्झिएकाले त्यस्ता कलाकृतिहरुमाथि बढी ध्यान केन्द्रीत गर्नु चीनका लागि महत्वपूर्ण हुन गएको छ ।
अझ उल्लेखनिय के छ भने अप्रिल २०१८ को निर्देशिकाले इस्लामिक वित्तिय प्रणालीको प्रयोगलाई निर्देशित गर्दछ । त्यसले मस्जिदहरुसँगै अन्य इस्लामिक संगठनहरु जसले किण्डरगारटेन अथवा विद्याय प्रश्चातका कार्यक्रमहरुसँगै अरेबिक भाषाका विद्यालयहरुले धर्म सम्बन्धमा शिक्षा दिएर विदेशमा विद्यार्थीहरुलाई पढ्न पठाउने कार्यलाई निषेधित गरेको छ ।
निंझिआ र गांन्सु प्रान्तले प्राथना गर्ने पारम्पारिक प्रार्थना अजान माथि समेत प्रतिबन्ध लाइएको छ । अधिकारीहरुले आफैं पनि मजिस्दहरुलाई लक्षित गर्दै आएका छन् । गंसुसको लिन्झिआ नजिकको एक गाँउ गुजआंगस्थित एक मस्जिदमाथि अप्रिल, २०१९ मा निर्माण कार्य गर्ने मजदुरहरुले नै प्रहार गरेर ध्वस्त बनाइदिएका थिए, जो आजसम्म पनि बन्न सकेको छैन ।
संचारमाध्यमहरुले एक भिडियो मार्फत गाओग स्थित मस्जिदमाथिका सुनौला ससाना गुम्बा (बुर्जा) लाई नष्ट पारेर त्यसका अवशेषलाई भवन समत मजदुरहरुले छर्कने गरेको दृश्य प्रर्दशित गरेको छ । युनान प्रान्तमा धेरै अघि देखि बस्दै आएका हुई समुदायले निनर्मित मस्जिदहरु सँगै तीनवटा साना गाँउहरु समेतलाई अधिकारीहरुले विना सरकारी आदेश निषेधित गरिएको छ । देशका तर्फबाट मस्जिदहरु अवैधानिक धार्मिक क्रियाकलापहरु संचालित गर्ने गरेको सम्बन्धमा वक्तव्य प्रसारित गरिएको थियो ।
दुई बर्ष अघि एक्कासी इस्लामिक परम्परा अनुरुप गर्ने प्राथमनालाई बन्द गरेको थियो । त्यस्तै गृहबाट समेत कुरान विक्रि गर्न प्रतिबन्धित गरिएको थियो । हआंग र हु लि द्वारा सन् २०१२ मा लेखिएको लेख मार्फत अल्पसंख्यकहरु प्रति सिपिसी व्यवहार प्रति टिप्पणी गरिएको थियो । जसले यस्तै प्रकारको प्रणाली लागु गरेको कारण सभियत यूनियनको पतन भएको दर्शाएको थियो । दुवै लेखकले यो पनि चेतावनी दिएका थिए की क्षेत्रीय आदिवासी बर्ग र क्षेत्रिय आदिवासी जस्ता दुवै प्रकारका चुनौतीहरुले आदिवासीबीच बिखण्डन बढाएको छ ।
निकर्षमा यो स्पष्ट देखिएको छ की चीनको आफ्नो अल्पसंख्यक समुदायप्रति दृष्टिकोण बर्षौ देखी परिवर्तित हुँदै आएको छ । लामो समय देखि चीनमा बस्दे आएका हुई र युधुर मुस्लिमहरु समेत त्यसलाई अनुपालन गर्नुपर्नेछ ।
सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण यो छ की आज सिन्चियोगमा जुन कडा नीति सुरु भएको छ त्यो चीनको अन्य भागमा समेत विस्तारित हुँदै गएको छ र त्यसैले त्यउस्ता कामलाई चीन भित्र नै सिमित रहेनेछ र प्रतिवन्धले गर्दा विश्वका अन्य मुस्लिम बाहुल क्षेत्रहरुका संचार माध्यमहरुमा समेत स्थान पाउन सकेको छैन ।
अनिकालमा बीउ जोगाउनु, हुलहालमा जीउ जोगाउनु !
‘पाहुना प्रेमी’ मन्त्रीज्यू, कोरोनाको त्रास फैलिँदा किन यति गैरजिम्मेवार ?
कोरोनो भाइरसलाई लिएर सी जिनपिंग कति कमजोर छन् ?
आफ्नै अन्त्यतिर बढ्दै पाकिस्तान
कांग्रेसलाई सुझावः क्रियाशिल सदस्यता थप्ने होइन, सदस्यको क्रियाशिलता बढाऔं
के कोरोनाबारे चीनले दिएको जानकारी पत्याउन सकिन्छ ?